Baaq ay si wada jir ah usoo saareen xubnaha jaaliyadaasi ayaa waxaa taageero wanaagsan loogu muujiyey sida ay ula dhacsan yihiin xilka cusub ee loo caleema saarey Suldaan Warsame oo noqon doona suldaanka Beesha jiide oo kamid ah beelaha taariikhda fog iyo magaca ku leh soomaaliya iyo guud ahaan caalamka.
Baaqaan jaaliyada soo saartay oo lasoo gaarsiiyey Warqabadka Baidoanews ee Magaalada Zurich ayaaw axaa ku saxiixnaa.
1- Abukaate Cabdi Muusa Mayow
2- Dr. Xasan Yerow
3-Dr. Xaaji Maxamed Abow
4- Dr. Cabdulaahi Ibraahim "Amaandhorey"
5- Maxmed C/raxmaan "Jabka"
6- Xasan Shariif Subeer
7- Xaaji Yuusuf
8- Abwaan Iithow
9- Dr. siidow
10- Al fanaan Cumar Shariif
11- Sheekh Xasan Sheekh Aadan "Geeledlle"
iyo magacyo kaloo tiro badan oo ay ku jireen Haween iyo waxgarad kale waxayna Jaaliyadaan Ay noqon doontaa tii koowaad ee u hambaliyeysa Suldaanka Cusub waxayna baaq dad daar ah u direen Suldaan warsame oo ay ugu baaqeen inuu dadkiisa u Cadaalad falo.
Isla markaana ka shaqeeyo isu keenista walaalaha iyo ka shaqeynta maslaxada guud iyo tan beeshiisa, waxaa lagala dardaarmey inuu Beesha u horseedo Wado qaldan, Degenaasho la'aan iyo burbur waxaa ugu dambeyntii loo duceeyey Suldaan warsame in Howshaan Culus Illaah La garab galo.
Xukuumadda Somalia oo ka jawaabtay Baaqii Aqalka Sare Farriinna u dirtay Dowlad Goboleedyada
DF oo qoraal u dirtay madaxda ku shirsan Kismaayo!!
Suldaanka Beesha Murusade oo waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashada Gen:Gaafow(Aqriso)
War Cusub oo laga helay Saraakiil DF Kismaayo u dirtay oo Jubbaland lagu xiray!
Gudoomiyaha Degmada Buurhakaba oo Hambalyo iyo Bogaadin loo diray